Ameerikaan "Mootummaan Miyaanmaar Muslimoota Rohingiyaa Irratti Duguuggaa sanyii raawwataa jira" jechuun labsite. - NuuralHudaa
Ameerikaan “Mootummaan Miyaanmaar Muslimoota Rohingiyaa Irratti Duguuggaa sanyii raawwataa jira” jechuun labsite.
Last updated Feb 26, 2018 24
Mootummaan Ameerikaa ibsa Roobii kaleessaa baase kanaan , dararaan Muslimoota Rohiingiyaa irratti adeemsifamaa jiru duguuggaa sanyii akka ta’e labsuun, qondaaltota waraanaa badii kana keessaa harka qaban irratti tarkaanfii kan fudhatu tahuu akeekkachiise.
Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Riiks Tiilarsan akka jedhetti, “mootummaan Ameerikaa ragaalee argate hundaa ofegannoo cimaan eega qoratee booda, dararaan waraana Miyanmaari fi hidhattoota Budhaatiin Muslimoota Rohingiyaa irratti geggeeffamaa jiru, duguuggaa sanyii kan ofkeessatti hammate tahuu mirkanaayee jira” jechuun ibse.
Mr Tiilarsan ibsa isaa kanaan akka jedhetti, ogeeyyiin idil addunyaa dararaa Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame akka qorataniif, Mootummaan Miyanmaar akka hayyamu Ameerikaan kan gaafatte tahuu ibsuudhaan, dabalatanis Yunaayitid Isteet hoggantoota waraana Miyanmaar irratti qoqqobbi kayuudhaaf kan qorataa jirtu tahuu ibse. Haata’u malee mootummaa Miyaanmaar guutuu irra qooqqobbii kayuuf karoora kan hinqabne tahuu ibse.
Dhaabbileen mirga namoomaa labsii Ameerikaa kana ilaalchisee, “Mootummaan Ameerikaa caldheensa yeroo dheeraa booda labsi kana basuun sirrii tahus, ammas tarkaanfii cimaa fudhachuu qaba” jechaa jiru.
Muslimoonni Rohingiya 600,000 ol tahan dararaa waraana Miyanmaar jalaa qeyee isaanii irraa buqqa’anii Baangilaadiish keessa kan qubatan yoo tahu, namoonni kuma hedduun lakkaawaman ammoo kan ajjeeffaman tahuu gabaasni mootummoota gamtoomanii ni mul’isa.
May 19, 2022 sa;aa 5:27 pm Update tahe